Soomaali Lagu Dilay Sweden – Heemaal News Network
Koox hubeysan ayaa rasaas ku furay goob ay ku sugnaayeen Muwaadiniin Soomaliyeed oo ku taalla dalka Sweden, iyada oo la sheegay in rasaastaas ay dhalatay khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac.
Goobta uu weerarka ka dhacay ayaa waxaa ay ku taallaa Xaafada Tensta oo ka tirsan Magaaladda Stockholm ee caasimadda Sweden, waxaana halkaasi ku geeriyooday muwaadin Soomaaliyeed halka laba kale ay ku dhaawacmeen.
Ciidamo ka tirsan Booliska dowladda Sweden ayaa gaaray halka dilka uu ka dhacay, waxaana, iyaga oo kaashanaya Soomaali kale oo meesha ku sugneyd ay goobta ka qaadeen meydka muwaadinka Soomaaliyeed iyo labada qof ee dhaawacmay.
Lama oga waxa ay ahaayeen Kooxda weeraraka geysatay iyo sababta ka dambeeysa, hayeeshee Soomaalida ku nool Xaafada Tensta oo ka tirsan Magaaladda Stockholm ee caasimadda Sweden ayaa waxaa ay sheegeen in arrintaan ay soo laab laabatay, isla markaana ay cabsi dareemayaan.
Qaar kamid ah dalalka Yurub iyo Afrika ayaa waxaa Soomaalida inta badan looga geystaa dilka iyo dhaca, waxaana ugu daran dalka Koonfur Afrika oo inta badan Soomaalida lagu dilo laguna boobo hantidooda.